Ukuze amasampula, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ukuze ukukhiqizwa ngobuningi, isikhathi phambili izinsuku 7-30 ngemuva kokuthola inkokhelo idiphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi siyakwazi ukwenza njalo.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha ukuthekelisa kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzise ukupakisha okuyingozi okukhethekile kwezimpahla eziyingozi nabaqinisekisi bokugcina abandayo abagunyaziwe bezinto ezizwela ukushisa. Ukupakisha kwangochwepheshe nezidingo zokupakisha ezingejwayelekile kungahle kutholakale imali eyengeziwe.